Cabdiraxmaan Cirro oo ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan Guddoomiyaha Xisbiga Waddani. —
Home » Cabdiraxmaan Cirro oo ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan Guddoomiyaha Xisbiga Waddani.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan in uu qabto Xilka Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani (Somaliland) sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay Bartiisa.
Cirro ayaa tilmaamay in uu Shirweynaha Xisbiga Waddani ee la qorsheeyay in uu dhaco 30-31ka Oktoobar 2021 in uu ka dhex shaacin doonno in uu ku haminayo qabashada Guddominta Xisbigaan Mucaaradka ah.
“Waxa aan maanta oo Jimce ah si rasmi ah u iclaaminayaa in aan ahay Murashax u taagan Jagada Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI oo aan ka dhex tartami doono Shirweynaha Xisbiga oo qabsoomi doona 30-31 Oktoobar 2021. GUUL” ayuu ku yiri qoraalkiisa.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ah hoggaamiyaha Xisbiga Waddani waxa uu ku metalay Doorashadii ka dhacday Somaliland, balse haatan waxa uu doonayaa in uu ku loolamo Guddoominta Xisbigaan.
Musharixiin kale oo xubno ka ah Waddani ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa in dhankooda ay ku dhawaaqaan shaacinta musharaxnimadooda si ay ugu tartamaan qabashada guddoominta Xisbigaas.
September 14, 2021 By radiosomit.com2 Mins Read